Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture – FAO | Primature
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO
Lapan’i Mahazoarivo, ny 25 oktobra 2021 – Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian androany maraina teto Mahazoarivo ny delegasiona iray avy amin’ny FAO, notarihin’Andriamatoa Rein Paulsen, Directeur des Urgences de la FAO.
Iaraha-mahalala, hoy ny tompon’andraikitry ny FAO, ny hatsaran’ny fiaraha-miasa nisy tamin’i Madagasikara hatrizay, ary izany dia efa hatry ny ela tokoa, saingy mbola nifampidinika ela tamin’ny Praiminisitra ny delegasiona, hijerena ny fomba hahafahan’ny firenena mamaly ara-potoana ny filàna hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, indrindra ho an’iny faritra atsimon’ny nosy iny.
Voaresaka tao anatin’izany ny fiomanana mialoha amin’ny fahafahana maharitra miatrika izany tsy fanjarian-tsakafo izany, ka tanjona ny hahatongavana amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo.Araka izany dia andrasana ny faneken’ny governemanta an’ireo vinavinam-piaraha-miasa, sy ny firosoany lalina amin’izany.
Notsiahivina androany fa ny hetsika nataon’ny FAO hatrizay dia tsy teo anivon’ny fitondram-panjakàna foibe ihany, fa nisokatra tamin’ny fiaraha-miasa tamin’ny Faritra rehetra, ary heverina ny hanatsaràna izany, indrindra ho an’ireo tokontrano tena marefo any amin’ny faritra Atsimo.
Nankasitrahan’ny Lehiben’ny governemanta ny fifanakalozana, ary teo no nanambaràny tamin’ny FAO ny fahavononan’ny fanjakana Malagasy hampiroborobo hatrany ny fiaraha-miasa.
← Famerenana ny fandriampahalemana
JIR andiany fahatelo →
Visite d’une mission du FMI
Fitsidihan’ny Ambasadaoron’i Suisse